Social Media: ofwa nke ohere maka obere azụmaahịa | Martech Zone
Afọ iri gara aga, nhọrọ ịzụ ahịa maka obere ndị ahịa nwere oke oke. Omenala mgbasa ozi dịka redio, Tv na ọbụlagodi mgbasa ozi kachasị dị oke ọnụ maka obere azụmaahịa.
Mgbe ahụ ịntanetị bịara. Email ahịa, mgbasa ozi mmekọrịta, blọọgụ na okwu mgbasa ozi na-enye obere ndị nwe ụlọ ahịa ohere ịkọwa ozi ha. Na mberede, ị nwere ike ịmepụta echiche ahụ, ụlọ ọrụ gị buru ibu karịa site na enyemaka nke nnukwu weebụsaịtị na mmemme mmemme mmekọrịta mmekọrịta siri ike.
Mana olee otu ụlọ ọrụ ndị a si eji ngwaọrụ ndị a eme ihe n'ezie? Kwa afọ kemgbe afọ 2010, anyị na-ajụ ndị nwere obere azụmaahịa ajụjụ ka ha ghọta ka mgbasa ozi mmekọrịta ha na ngwakọ ahịa ha si dị.
Kwa afọ, data na-akwado ụfọdụ echiche anyị nwere ogologo oge ma na-eme ka nkwenkwe ndị ọzọ maa jijiji. Ya mere, anyị dị njikere juo ajuju ọzọ. Ọ bụ ezie na ụfọdụ ihe adịgide adịgide, anyị ahụla mgbanwe dịka ndị nwe ya yiri ka ha na-arụsi ọrụ ike, ma nwee mmasị iji usoro mgbasa ozi maka ịmatakwu ihe. Anyị chọrọ ịma ma ihe anyị na-ahụ site na ndị ahịa anyị bụ ihe a na-ahụkarị n'ofe ndị na-ege ntị.
N'ọmụmụ ihe nke afọ gara aga, ọ bụ ezie na ndị nwe ha nọ na-arụsi ọrụ ike, nkezi oge etinye na mgbasa ozi ọha na eze nọgidere na-ada ntakịrị. Okwu ndị a na-ekwu n'ọmụmụ ihe anyị dị ka ihe na-egosi mbelata ada site na ngwakọta nke ngwa ọrụ na-arụpụta ihe yana ụzọ elebara anya na mgbasa ozi mmekọrịta. Anyị chọrọ ịma iji hụ ma nke a ọ ga-aga n'ihu na 2013.
Forbes na akwụkwọ ndị ọzọ na-ebu amụma banyere ojiji nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya maka nnukwu ụlọ ọrụ, anyị chọrọ ịma ihe na-eme na obere ụlọ ọrụ azụmahịa.
Ga Google+ emesia nweta ohere na tebụl na Facebook, Twitter na Linkedin? Otu afọ gara aga, ihe karịrị 50% nke ndị zaghachirinụ anyị kwuru na ọ dịtụghị mgbe ha banyere G +. Onwe m echere m na anyị ka nọrọ otu afọ na netwọkụ a, ma achọrọ m ịma ihe data ahụ kwuru.
Kedu ka Pinterest, Instagram na saịtị ndị ọzọ nwere onyonyo dabara na njikọta mmekọrịta mmadụ na ibe ya? Otu afọ gara aga enwere m obi anụrị maka saịtị foto ndị a na-eto n'ike n'ike, mana maka ọtụtụ akụkụ, ndị ahịa azụmaahịa m anaghị enwe nnukwu ịnụ ọkụ n'obi banyere imikpu n'ime.
Yabụ, ọ bụrụ na inwere ma ọ bụ na-arụ ọrụ maka ụlọ ọrụ nwere ihe na-erughị ndị ọrụ 100, anyị chọrọ ịma ihe ị chere. Kedu ka ị si eji mgbasa ozi mmekọrịta dị ka akụkụ nke ahịa gị. Biko were nkeji ole na ole zaa ya ajụjụ ndị dị na nyocha anyị. Anyị ga na-achịkọta data site na ngwụcha February, wee kesaa nsonaazụ mmiri a.
Tags: marketingobere ulo oru mgbasa ozielekọta mmadụ mediannyocha mgbasa ozi mmekọrịta